Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Turkey na -emechi mgbochi COVID maka ndị mbịarambịa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
A na-etinye mmelite ndị a na ntinye iji gbochie mgbasa nke ọrịa COVID-19 na Turkey, a ga-amalitekwa na Satọde, Ọgọst 4.
Turkey na-emelite mgbochi mgbochi COVID maka ndị mbịarambịa.
Iwu chọrọ iji gbochie mgbasa nke ọrịa COVID-19 na Turkey.
Iwu emelitere ga -amalite ọrụ echi.
Ministri ime ụlọ nke Turkey wepụtara okirikiri taa, na -ekwupụta mmelite ọhụrụ maka ihe achọrọ na mgbochi maka ndị ọbịa si mba ọzọ na -abata na mba ahụ.
Ndepụta uhie: Brazil, South Africa, Nepal, na Sri Lanka
Nkwụsị nke ụgbọ elu ndị si na Brazil, South Africa, Nepal, na Sri Lanka ga -aga n'ihu ruo ọkwa ọzọ.
A ga -agwa ndị njem gara mba ndị a n'ime ụbọchị 14 gara aga ka ha nyefee nsonaazụ ule PCR na -adịghị mma nwetara karịa awa 72 tupu ha abanye. toro toro.
A ga -ekewapụkwa ha iche ụbọchị iri na anọ n'ebe ndị gọvanọ kpebisiri ike, na njedebe nke a ga -achọ nnwale ọzọ. Ọ bụrụ na enwere nsonaazụ nnwale dị mma, a ga -edobe onye ọrịa ahụ iche, nke ga -ejedebe na nsonaazụ na -adịghị mma n'ime ụbọchị 14 na -esote.
Bangladesh, India na Pakistan
Emeela ka iwu njem maka Bangladesh, India, na Pakistan dị mfe, a ga -arịọ ndị njem si mba ndị a, ma ọ bụ ndị gara mba ndị a n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga ka ha nyefee nsonaazụ ule PCR na -adịghị mma nwetara ruo awa 14 tupu mgbe ahụ.
Ndị dekọrọ na-anata ọgwụ mgbochi COVID-19 abụọ nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa ma ọ bụ Turkey nyere nkwado ma ọ bụ otu ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson opekata mpe ụbọchị 14 tupu ha abanye na Turkey, a ga-agụpụ ya iche.
UK, Iran, Egypt na Singapore
A ga -achọ ndị njem si UK, Iran, Egypt, ma ọ bụ Singapore ka ha nyefee nsonaazụ adịghị mma site na nnwale PCR emere karịa awa 72 tupu ịbanye.
Maka ndị njem si Afghanistan, ndị nwere ike ịnye akwụkwọ na-egosi na a na-enye ha ọgwụ COVID-19 n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga ma ọ bụ gbakee n'ọrịa COVID-14 n'ime ọnwa isii gara aga agaghị achọ nsonaazụ nnwale ma ọ bụ iche.